Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Ukupasa impilo kwe-COVID-19 ngoku kunyanzelekile e-Itali
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ifunyenwe njengesixhobo sokubhala imeko ye-COVID-19 yomntu kunye nokugonywa ukulungiselela ukuhamba, izatifikethi zempilo ze-coronavirus sele zingenisiwe kumazwe amaninzi e-EU.
I-Itali ngoku ifuna isiqinisekiso sokugonya se-COVID-19 "Green Pass" kubo bonke abasebenzi besizwe.
Abasebenzi base-Italiya ngaphandle kwesiqinisekiso sempilo banokuxhonywa kwimisebenzi yabo ngaphandle kwentlawulo.
Abasebenzi abaza kusebenza ngaphandle kwesatifikethi baya kuhlawuliswa imali enkulu ukusuka kwi-600 ukuya kwi-1,500 Euro.
Isatifikethi se-COVID 'Green Pass' siya kuba sisinyanzelo kubo bonke abasebenzi base-Itali, ngokwesicwangciso esitsha, esivunywe ngurhulumente wase-Itali namhlanje.
Isicwangciso, esivunyiweyo ngurhulumente wase-Italiya namhlanje, kwaye sixhaswe ngokungummangaliso yiNdlu yeeNgwevu yase-Italiya (nge-189 yokuvotela yona, inama-32 kuphela ngokuchasene kunye nokungavunyelwa kabini) kufuneka iqale ukusebenza ngo-Okthobha u-15.
Isicwangciso esitsha, esiza kubona abo bangenayo ikhefu ngaphandle kokuhlawulwa, siya kuhlala sisebenza kude kube sekupheleni konyaka.
Ukuqala nge-15 ka-Okthobha, bonke abasebenzi bakarhulumente kunye nabecandelo labucala e-Italiya kuya kufuneka bafumane i I-COVID-19 'Green Pass' isatifikethi.
Abo basilelayo ukuvelisa isatifikethi xa beceliwe banokuxhonywa kwimisebenzi yabo emva kwexesha leentsuku ezintlanu, nangona bengenakugxothwa.
"Sandisa uxanduva lokupasa okuluhlaza kwihlabathi liphela lomsebenzi, eluntwini nakwabucala, kwaye senza njalo ngenxa yezizathu ezibini ezibalulekileyo: ukwenza ezi ndawo zikhuseleke nokwenza umkhankaso wethu wokugonya womelele," umphathiswa wezempilo uRoberto Speranza utshilo.
Abasebenzi abangenaso isatifikethi se-COVID-19 esisemthethweni abanobuganga bokubonisa umsebenzi banokuhlawuliswa imali enkulu, ukusuka kwi- € 600 ukuya kwi- € 1,500 ($ 705 ukuya kwi- $ 1,175). Iinkcukacha ezithe kratya zesicwangciso kulindeleke ukuba zaziswe ngokusesikweni kungekudala.
Nge-Agasti, ElamaTaliyane wenze ukuba kudlule indawo yokundwendwela iindawo zikawonke-wonke, ezinjengeevenkile zokutyela kunye neebhari, emva koko yenze ukuba kube sisinyanzelo kootitshala nakwabanye abasebenzi becandelo likarhulumente ekuqaleni kwale nyanga. Ngoku, ibe lilizwe lokuqala laseYurophu ukwenza isatifikethi sinyanzele bonke abasebenzi.